hla moe 24၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
hla moe 24's Apps
hla moe 24's Likes
Hla moe 24's ၏မိတ်ဆွေများ
hla moe 24's Groups
hla moe 24's Discussions
Started this discussion. Last reply by ကိုကျော်သန်း Sep 27, 2014.5Replies0Likes
လူ့ ဘဝမှာ တိုးတက် အောင်မြင်ချင်လျှင် ဘာတွေ လုပ်ရမလဲး ?ထေရဝါဒ နည်းအရပေါ့.............ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ယောက်ကျား ဖြစ်ခြင်း မိန်းမ ဖြစ်ခြင်း
Started this discussion. Last reply by ကလေးတို.ဆရာမ Jul 13, 2012.2Replies2Likes
သူတော်စင်အပေါင်းတို့ ယောက်ကျားဖြစ်ခြင်း မိန်းမဖြစ်ခြင်းဟာ ကုသိုလ်နှင့် ဆိုင်ပါလား ???ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
အရွတ် အဖတ် သာသနာ
Started this discussion. Last reply by အရှင်ဝိဝေက Apr 26, 2012.3Replies0Likes
အချို့ သော သူများသည် ပရိတ်တွေ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တာ ပဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်တာဂုဏ်တော် ပူဇော်မူ့ တွေအပေါ အရွတ် အဖတ် သာသနာ မဟုတ်ဘူးဟူ၍ ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ် ....သင်ဘယ်လို ထင်မြင်ပါသလဲ ပြောခဲ့ပေးပါလား ကြိုဆိုပါတယ်ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Started this discussion. Last reply by hla moe 24 Apr 23, 2012.4Replies0Likes
ကျွန်တော် အလှူကြီး တခု ပြုလုပ် ပြီစိုပါစို့ ဝက်တွေ ကြက်တွေ နွားတွေကို သတ်ပြီး ချက်ကျွေးမယ်လှူပြီဗျာဘာတွေ ဘယ်လို ဖြစ်ကုန် မလဲးဗျာ သိချင်လို့ ပါ ...ရင်ထဲးရှိတဲ့အတိုင်း စိတ်ထဲး ရှိတဲ့အတိုင်း…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
hla moe 24 သည်လက်ဆောင်မရရှိသေးပါ။
.. .. လက်ရှိအချိန်ထက်ကောင်းသောအချိန်မရှိပါ..
hla moe 24 သည်thein wai's ၏ 'သံဃာတော်များ နေ့တစ်ဝက်သာ သုံးဆောင်အပ်သည့် စားသောက်ဖွယ်ရာများ။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
hla moe 24 သည် thein wai's၏ 'ငါကိုယ်တိုင် သောတာပန် တည်ပြီလား။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
hla moe 24 သည် thein wai's၏ 'ပြိတ္တာ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ ?။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
hla moe 24 သည် thein wai's၏ 'ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဘာသာတရား ဆောင်ပုဒ်များ(၂၄)။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
hla moe 24 သည် Thein Naing Ohn's၏ 'ဥာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြား၍ သိထိုက်သော ပရမတ္တတရားဆိုသည်မှာ -'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
hla moe 24 သည် thein wai's၏ 'သီလခံယူတိုင်းမှာ သရဏဂုံ ထပ်ယူဖို့လိုပါသလား။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
hla moe 24 သည် thein wai's၏ '"ပဌာန်းတရားတော်" (အပိုင်း ၁)'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
hla moe 24 သည် Thein Naing Ohn's၏ 'ပထ၀ီဓာတ် နှင့် ဉာဏ် (၉) လွှာ (အပိုင်း ၅)'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
hla moe 24 သည် thein wai's၏ 'စူဠသောတာပန် ဖြစ်ရခြင်း၏ အကျိုးတရားများ။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
hla moe 24 သည် thein wai's၏ 'စူဠသောတာပန်နှင့်ပတ်သက်၍ မြောင်းမြမြို့ဝေဠုဝန်ဆရာတော်၏ သြ၀ါဒ။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
hla moe 24 သည် ဦးထွန်းလင်းဦး's၏ 'တရားအားထုတ်တယ် ဆိုတာ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
hla moe 24 သည် ဦးထွန်းလင်းဦး's၏ 'သကဒါဂမ်လက်မှတ်'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
hla moe 24's ၏ဓါတ်ပုံများ
2:35am အချိန်ဇူလှိုင် 24, 2017, တွင် ဖိုးကံထူး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
4:52pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 21, 2015, တွင် အေးမြတ်မြတ်မိုး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဓမ္မ ဒေါင်းလုပ် ဆိုတာ Website နာမည်လားအမ
3:27am အချိန်နိုဝင်ဘာ 6, 2015, တွင် အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)လာရောက် လည်ပတ်သွားပါသည်။ ၀၉.၄၉၃၀၇၇၄၃
9:42pm အချိန်မေ 27, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မွေးနေ့မှာ ကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေ ဆည်းပူးအားထုတ်မယ်ဆိုရင် " မွေးနေ့ကိုယ်တိုင်က တန်ဖိုးမရှိသော်လည်း မွေးနေ့ကို
အကြောင်းပြုပြီးတော့ ရလာတဲ့ တရားတွေဟာ တန်ဖိုးရှိပါတယ် " လို့ ခွဲခြားသိဖို့လိုတာပေါ့။
ဆိုလိုတာက မွေးဖွားလာခြင်းဟာ မကောင်းဘူး၊ မကောင်းတဲ့ထဲကမှ အကောင်းကဘာလဲဆိုရင် မိမိသန္တာန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကုသိုလ်တရားတွေက ကောင်းတယ်၊
အများကို အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ အလုပ်တွေက ကောင်းတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်အမှီပြုပြီးတော့ အများချမ်းသာတယ်ဆိုရင် ကောင်းတယ်၊ အဲဒီ ကောင်းတာတွေ အများချမ်းသာ
တယ်ဆိုရင် ကောင်းတယ်၊ အဲဒီ ကောင်းတာတွေ များများရမှ တို့တွေဟာ ကြီးမားတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ "ဇာတိ" ဆိုတဲ့ မွေးဖွားခြင်း(မွေးနေ့)ကို အရင်းတည်ပြီးတော့ ပါရမီကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ Happy birthday to you လို့ဆိုပြီးတော့ ဘာနဲ့ happy ကြမှာလဲ၊ မွေးနေ့တိုင်း မွေးနေ့တိုင်းမှာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့
ရလာတဲ့ ကုသိုလ်တရားသည်သာလျှင် မွေးနေ့ရဲ့ အမြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
တရားပလ္လင်ထက်က စကားအလင်္ကာများ စာအုပ်မှ ကောင်နုတ်ချက်
9:03pm အချိန်မေ 27, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
3:49pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 31, 2015, တွင် ကလေးတို.ဆရာမ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
3:00pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 29, 2015, တွင် မတင်တင်မိုး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
8:06pm အချိန်ဇွန် 9, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကိတ်မုန့်ကြိုက်မှန်းသိရင် အများကြီးထည့်ပေးပါတယ်။ ဟိ တကယ်မပေးရလို့လားမသိဘူး အရမ်းစေတနာကောင်းနေတာ။ စိတ်အစဉ်အေးချမ်းပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်.......
8:18pm အချိန်မေ 27, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
7:48pm အချိန်မေ 9, 2014, တွင် ဖိုးကံထူး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
Hla moe 24's Blog
ဘွန်တော ဗျို့ 
ဒီဘလော့ကှိုဧပြီ 24, 2013 တွင်10:27pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 15 Comments5Likes
ချစ်ခင်လေးစားရပါသော စိတ်ထားဖြူစင် ပါရမီရှင် အပေါင်းတို့ ခင်မျာ...
လာမည့် ဝါဆိုမှာ အသင်းမှနေ၍ စုပေါင်းပြီး ပထမဆုံး အကြိမ်ဝါဆို သင်္ကန်း
ဆပ်ကပ်ကြပါစို့ လား...အကျိုးမျှော် နိူးဆော် လိုက်ရပါသည်.......
အမှန်တကယ် ချို့ တဲ့သောနေရာ များကိုရှာဖွေပြီး လှူတန်းကြပါစို့ နော်
မိတ်ဆွေများဘက်က တာဝန်ယူပြီး လှူတမ်းပေးမည်ဆိုပါက မြန်မာပြည်တွင်း
ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် သွားေ၇ာက် လှူတမ်းကြမယ်ဗျို့ ......
(ဆန္ဒရှိတာလေးတွေေ၇းထားခဲ့ပါ)...ဘွန်တောဗျို့ 
ဒီဘလော့ကှိုဧပြီ 16, 2013 တွင်8:56pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments2Likes
မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံသော နှစ်သစ်ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးရင်း
နှစ်သစ်မှ စတင်ကာ အမဲသား (နွားသား၊ ကျွဲသား)မစားရေးကို အဖွဲ့ သားတွေရော..မိတ်ဆွေ
တွေများကိုပါတဆင့်ပြေားကြားပေးဘို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တောင်းဆိုရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ တခြား မဟုတ်ပါဘူး၊ ကုသိုလ်ပိုရအောင်လည်းမဟုတ်ပါဘူး ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုတော့ အစားသောက်ဟာကုသိုလ် အကုသိုလ်ကိုတိုက်ရိုက်မှ မဖြစ်စေတာ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး စားသောက်နေတဲ့ ဆန်တွေ စပါးတွေဟာ နွားတွေ ကျွဲတွေရဲ့ လုပ်အားကြောင့် ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့…
ဓမ္မပဒကျမ်းလာ လူမူ့ နီတိများ
ဒီဘလော့ကို နိုဝင်ဘာ 26, 2012 တွင်1:12pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
မိမိ၏ အတွင်းစိတ်ရိုင်း စိတ်မိုက်တို့ ကို
တခြားအရာအားလုံးကို အောင်နိုင်ခြင်းထက် ပို၍မြတ်၏..
နတ်ဒေဝါနှင့် မာရ်နတ် ဗြဟ္မာ
ဒီဘလော့ကို နိုဝင်ဘာ 16, 2012 တွင်7:15pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
ကောင်းစွာ ပြေားကြားထားသော တရားစကားတို့ သည်.
အဆင်းသာရှိ၍ အနံ့ မရှိသော ပန်းနှင့်...တူ၏.
ကောင်းစွာပြေားကြားထားသော တရားစကားတို့ သည်
အဆင်းရော အနံ့ ပါ ပြည့်စုံသော ပန်းနှင့် တူ၏